Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 10 Des 2017, 21:07
Noho ny antony maromaro, ny toetr'andro mivantana eo amin'ny fiainako FSX ratsy dia ratsy. Tsy diso fotsiny anefa, fa tsy misy na aiza na aiza misy realiste, na marina mihitsy aza ho an'ny seranam-piaramanidina sasany. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny seranam-piaramanidina any Eoropa dia miatrika fahatarana noho ny oram-panala mahery vaika.
Fahitana: 4000 m
Mientanina amin'ny 700 ft
In FSX, fomba samy hafa. Lanitra mazava, rivotra hafa sy mafana .... inona marina? Misy fomba manodidina azy ve?
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by DRCW » 13 feb 2018, 21:54
Ny motera Weather an'ny famoahana boaty FSX dia tsy tohanan'ny JESPEN izay manome anao ny toetr'andro velona. Heveriko fa mbola misy ho an'ny Steam Edition raha toa ka manana fifanarahana amin'izy ireo i Dovetail. Tsy maimaim-poana ny serivisy ho an'ny Dovetail. Tahaka ny amin'izao fotoana izao ny FSW dia mbola tsy manana motera toetr'andro miasa na mpamorona antoko fahatelo azonao vidiana iray. Ny fomba tokana ahazoana ny toetrandro tena izy FSX Fandaharana boxed, dia ny hividianana iray tahaka ny Active Sky 2016
Joined: 08 Des 2017, 18:52
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by goffers » 01 Mar 2018, 13:20
Nahita fandaharan-toetrandro maimaimpoana aho - kely sy manindrona ny toetr'andro mivantana FSX - FSXWX.
Tsy mila mametraka ianao. Mihazakazaha ny FSXFandaharana WX rehefa tafiditra ianao FSX.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 02 Mar 2018, 10:07
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by goffers » 27 Apr 2018, 06:40
Salama Dariussssss. Tsy azonao antoka izay tianao holazaina. Toa miasa ho ahy izao ny rohy.
Angamba ity iray ity (izay ahitana ny finday tena izy). http://www.plane-pics.de/fsxwx/instructions-fsx.htm
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Welsheagle » 27 Apr 2018, 11:07
Ity rohy ity dia miasa ho ahy kanefa tiako ny manoro hevitra https://www.fsrealwx.net/
Mampiasa izany aho ary manome anao ny tena toetry ny toetrandro .. ny fotoana rehetra.
Azonao atao ny mampiasa ny maimaimpoana maimaimpoana na manavao ny pro.